Zenzekelayo High Speed ​​UV Spot Varnishing Machine (Dual ...
Isantya esiphakamileyo esineentloko ezine ezine-UV Varnishing M ...
Isantya esiphezulu seVarnishing kunye noMatshini wokuCalendering
Ikhadibhodi yokusika umatshini
Isetyenziselwa ukusika kunye nokusika ikhadibhodi, ibhodi engwevu, njl njl. Sisixhobo esifunekayo sokugcina iincwadi kunye neebhokisi zezipho eziphezulu.
Uxinzelelo kumatshini we-bubble wewayini
I-168 senes uxinzelelo lwe-bubble umatshini we-bubble umatshini ngokwendlela efunwa ngumthengi kukuphuhliswa kwesixhobo esitsha sokubumba ibhokisi yesipho sephepha, amaqamza omphezulu womoya, imibimbi, ukugqwetha, kunye nekhadibhodi yegolide nesilivere, iphepha elikhethekileyo lokuncamathelisa iphepha alilunganga, iphepha lomhlaba eliqaqambileyo ukukrwela kunye neminye imiba yokulinganisa umatshini.
Kumacala omane umatshini edge
Kwibhokisi yewayini yobungcali, ibhokisi yesipho, uhlobo lwebhokisi yeti, kunye noluhlu lwezicelo zokupakisha zekhadibhodi ezingwevu.
Umatshini wokubamba ngesandla
Uyilo lwalo matshini yinoveli, icwecwe, ikhuselekile, yomelele kwaye kulula ukuyigcina.
Isakhelo sokusonga umatshini 211 ngokweemfuno zentengiso kukuphuhliswa kwesixhobo esitsha, isilinda ephezulu, wo Chuan PLC Taiwan wemview touch touch screen visual control, ukulungiswa kweparameter.
Lo matshini wamkela uhlobo lwamanzi okususa isixhobo, esinokuthi sisuse uthuli kwi-inki yokuprinta kwaye siphucule umgangatho wemveliso. Intloko yokuhanjiswa kweoyile yamkela ivili yerabha yokusebenza eqinileyo kunye neyomeleleyo, imela yeoyile echanekileyo yokucoceka kulula ngaphandle kokulimaza itanki yeoyile. Imela inokusetyenziswa ixesha elide. Ngaphaya koko, ukubonda kwephepha elingasemva kunokuhlala kugcinwa.
Ukuhambisa ngokuzenzekelayo ukuSonga umatshini wokuLaminetha
Inkqubo yokuzikhulula ngokuzenzekelayo: ifakwe kwisilawuli soxinzelelo, ukusebenza okuphezulu kunye nozinzo ngaphandle kwempembelelo.
Iimilo ezizenzekelayo ibhokisi engqongqo yokumakisha kunye neerobhothi
Umatshini webhokisi yesipho, ibhokisi yokupakisha, iibhokisi ezenziwe ngesandla zokwenza izixhobo zomhlangano, ezilahlwayo ziyakuqonda ukusongwa okwenziweyo, indlebe esongiweyo, ukususwa kwamaqamza kunye nokubumba kunye nokusonga kunye nokuqhubeka kwemisebenzi, kungonga ixesha elininzi kunye nokufakelwa, kuyiphucule imveliso isivuno sivelisa imveliso esiyikhethileyo yokuvelisa ibhokisi yokupakisha kwishishini.
Intloko Double umatshini oluzenzekelayo
Inokudityaniswa ngokugqibeleleyo kunye nomatshini weebhokisi ezizenzekelayo kunye nomatshini wokuzenzekelayo.
Kwimakethi yanamhlanje yokupakisha, ukulungiselela ukuphucula ukhuphiswano lwentengiso kunye nokwaziswa kwezixhobo ezizisebenzelayo kube yinto ephambili kuphuhliso lwamashishini kwinkampani yokupakisha.
Isantya esiphakamileyo seSantya esiSebenzayo esiSebenzayo seWindows Machine (Iglu esekwe emanzini / iGlu elinamafutha / Ifilimu eyakhelwe ngaphambili)
Lo ngumatshini wokulaminetha iwindow emininzi, ngokufudumeza kwaye ucofe i-roller yentsimbi yokuthambisa ukolula ifilimu kwiphepha elincamathelweyo. Isiphumo esihle se-lamination sinokufikelela kwaye iindleko zincitshisiwe.
Isantya esiphakamileyo soMatshini oSebenzisa iVarnishing Machine (iMisebenzi emiBini, kuwo omabini iphepha elingqingqwa nelicekeceke) Yonke indlela yokubamba izinyo ehambisa